Maitiro ekuwedzera shamwari kuApple Watch | IPhone nhau
Iyo Apple Watch inotitendera kumisikidza anowanzoitika uye akakosha kutaurirana se "Amigos”Kuti tikwanise kuzviwana nekukurumidza. Kune nzvimbo chete dzegumi nembiri dzadzo, imwe yeawa rega rega reawa, saka isu tichafanirwa kusarudza zvakanaka izvo zvatinosanganisira uye izvo zvatinosiya kunze. Kufanana nehuwandu hwakawanda hwekugadzwa kweApple Watch, tinogona kuita zvambotaurwa kubva ku iPhone yedu.
Muchikamu chino cheshamwari tichava nemikana mitatu: kuwedzera sei shamwari dzedu, marongero atingaita shamwari dzedu y sei kudzima shamwari paApple Watch. Zvingave sei neimwe nzira, isu ticha tsanangura matanho ekutevera kuita ese aya zviito.
1 Maitiro ekuwedzera shamwari paApple Watch
2 Maitiro ekugadzirisa zvekare shamwari dzedu paApple Watch
3 Maitiro ekudzima shamwari paApple Watch
Maitiro ekuwedzera shamwari paApple Watch
Isu tinovhura iyo Apple Watch kunyorera pane yedu iPhone.
Isu tinobata pane iyo tebhu Wachi yangu kubva pasi.
Isu tinoshambira pasi uye tapota Amigos.
Takatamba pa Wedzera Shamwari Mugomba risina chinhu
Tinotsvaga wekuonana naye tinoda kuwedzera.
Tinotamba pazita kuonana
El kutaurirana kunoonekwa mune yedu shamwari runyorwa uye ichaenderana neIshamwari application yeApple Watch yedu
Maitiro ekugadzirisa zvekare shamwari dzedu paApple Watch
Takatamba pa Hora kumusoro kworudyi.
Isu tinobata uye tinobata pane iyo digitizer (mitsetse mitatu) kurudyi kweshamwari yatinoda kufamba.
Tinodhonzera shamwari yedu kune yake chinzvimbo chitsva.
Takatamba pa Zvaitwa kumusoro kworudyi.
Maitiro ekudzima shamwari paApple Watch
Tinotsvedza kubva kurudyi kuenda kuruboshwe pane shamwari iri mune zvinyorwa kuratidza bvisa bhatani.
Takatamba mu dzvuku kudzima icon kuruboshwe rwe avatar yeshamwari yedu.
Takatamba pa Bvisa kuratidza
Dzokorora kubvisa dzimwe shamwari.
Kukurumidza kudzima imwe chete shamwari, ingo shandura kuruboshwe uye tapota Delete kuti usimbise
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuwedzera shamwari kuApple Watch
Alexander M (@amavo) akadaro
kutanga vape apuro wachi hahahajjjaja
Pindura kuna Alexander M (@amavo)
Kutenda nerondedzero, inobatsira zvikuru.
mhoro ndine mawachi maviri emaapuro asi handigone kutumira kana kubata kana kurova kwemoyo, pane chakashata chandiri kuita
Hongu Vargas akadaro
Nei isiri iyo sarudzo yeshamwari? Icho chizvarwa chechipiri chakabatanidzwa neiyo iPhone 7plus uye ese ari maviri nezvazvino zvichangoburwa ...
Pindura kune YeSs Vargas
Uye hazvioneke pawachi yangu kubva pamazuva maviri apfuura, zvinofanirwa kunge zviri mushanduro 2 vanofanira kunge vakaibvisa.
1x23 iPad Nhau Podcast: Tine Apple Watch uye tinopindura mibvunzo yako